Ciidanka Somaliland oo tegay daafaha Taleex (Maxey doonayaan?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidanka Somaliland oo tegay daafaha Taleex (Maxey doonayaan?)
A warsame 23 April 2015 23 April 2015
Mareeg.com: Ciidan ka socda maamulka Somaliland ayaa shalay gaaray hareeraha degmada Taleex ee gobolka Sool, halkaasoo dorraad dagaal ku hex maray labo maleeshiyo beeleed.
Ciidanka Somaliland ee Taleex tegay ayaa fariisin ka dhigtay meel aan ka dheerayn degmada Taleex, waxaana ujeedada ciidankaas lagu sheegay sidii ay u kala dhex gali lahaayeen labada beelood talaadadii dagaalamay.
Cabdirashiid Xirsi Dalmar, oo ah guddoomiye ku xigeenka gobolka Sool ee maamulka Somaliland, ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka Somaliland u tagay Taleex qaboojinta coladda labada beeleedo.
“Ma ahayn ciidamadu duullaan ee waa kuwo doonaya inay wax ka qabtaan colaadda labada beelood u dhexeysa, waxaana rajeynayaa in waqti dhow ay guurti iyo wasiiro ka socda Somaliland hawshaasi u yimaadaan Taleex,” ayuu yiri Mr Dalmar.
Madaxdhaqameed iyo waxgarad miisaan ku leh degaanka ayaa haatan degaankaasi u jooga qaboojinta arrintan, iyagoo doonaya iney ka hortagaan dagaal mar kale halkaas ku dhex mara labada maleeshiyo beeleed.
Madaxeyne Xasan oo wax ka xusay guulihii Turkiga ee dagaalkii 1-aad ee Aduunka
Maamulka Puntland oo markab dagaal ka howlgeliyey xeebaha uu ka taliyo